क्यामरुन र मोदीको वक्तव्यमा नेपालको नाम किन ? पाकिस्तान, श्रीलंकादेखि सिरियासम्म चर्चा | Jukson
क्यामरुन र मोदीको वक्तव्यमा नेपालको नाम किन ? पाकिस्तान, श्रीलंकादेखि सिरियासम्म चर्चा
बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको समेत चर्चा गरिएको विषयले यहाँको मिडियामा चर्चा पाएको छ । तर, बेलायत र भारतका सरकार प्रमुखहरुले आफ्नो वक्तव्यमा नेपालको मात्रै चर्चा गरेका छैनन्, पाकिस्तानदेखि सिरियासम्म नाम लिएका छन् ।
बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको चर्चा हुनुलाई कतिपयले बेलायत भ्रमणमा मोदीविरुद्ध नेपालीले गरेको प्रदर्शनलाई कारण मानेका छन् । र, यसले नेपालको मामिलामा भारत र बेलायत एक मुख भएको संकेत गरेको भन्दै नेपालमा चासो बढेको छ ।
यही विषयलाई लिएर नेपालको मामिलामा बेलायतले भारतको नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेको अर्थसमेत लगाउन थालिएको छ । जबकि नाकाबन्दीका विषयमा बेलायत र भारतले केही बोलेका छैनन् ।
त्यसो त नेपालीहरुले मोदीको बेलायत भ्रमणका बेला नेपालको नाकाबन्दी हटाउन आग्रह गरियोस् भन्ने पत्रसमेत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । पूर्वगोरखा सैनिकहरुले क्यामरनलाई त्यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, जसको सम्बोधन बेलायतले गरेको देखिएन ।
अन्य देशको पनि चर्चा
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणका सिलसिलामा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा विश्वका विभिन्न मुलुकको स्थितिबारे दुई देशले समान धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा नेपालको संविधानले अन्य पक्ष (मधेसी) हरुको सरोकारलाई पनि समट्नुपर्ने र समावेशी हुनुपर्ने भन्दै भारत र बेलायत दुबै देश नेपालको संविधानले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा रहेको उल्लेख छ । साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि बेलायत र भारतले जोड दिएका छन् ।
बेलायत र भारतलाई कुन-कुन देशको मतलब ?
क्यामरन र मोदीले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘ग्लोबल पार्टनरशीप’ उपशीर्षकमा नेपाल लगायत विभिन्न देशहरुको चर्चा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा भारतलाई बेलायतले समर्थन जनाउने उल्लेख गर्दै एशिया तथा इण्डियन सागरमा स्थायित्वका लागि दुबै देशले साझा स्वार्थ रहेको बताएका छन् ।
मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमलाका दोषीमाथि कारवाहीका लागि पाकिस्तानलाई आग्रह गर्ने समेत संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
श्रीलंकाले राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायोगको संकल्पलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बेलायत र भारतले भनेका छन् ।
मालदिभ्सको स्थायित्व, समावेशी लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयमा जोड दिने दुई देशमा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा उल्लेख छ
त्यस्तै अफगानिस्तानको सार्वभौम, लोकतान्त्रिक तथा एकीकृत भविश्यको कामना वक्तव्यमा गरिएको छ ।
भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीले सिरिया र इराकमा समावेशी राजनीतिक व्यवस्थापनमा जोड दिने बताएका छन् । पश्चिम एशिया र मध्यपूर्वको विषयमा निरन्तर सम्वादमा रहने भारतीय र बेलायती प्रधानमन्त्री सहमत भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले युक्रेनको संकटका बारेमा पनि बोलेका छन् ।
तर, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्यमा अन्य देशहरुका विषयमा यसरी चर्चा गर्नु कत्तिको शोभनीय होला ? कूटनीतिक मामिलामा यो एउटा बहसको विषय हुन सक्छ ।
यौन सम्पर्कका लागि विदा दिने सरकारको तयारी
‘छल्कि’मा दीपाश्री र रेखा, सुध्रियो सम्बन्ध ?
आमिर खानका तिन रेकर्ड जुन कसैले तोड्न सक्दैनन् : अब सलमान बनाउदैछन् चौथो रेकर्ड
कण्डमको साटो प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्दा यो जोडीको यस्तो हालत !
विनोद र दिपकको ‘कस्तो यो जादु’
नेपालको भूकम्पमा विश्वका चर्चित भूगोलविदको निधन